कमरेड प्रकाशसँगको त्यो अन्तिम भेट
जनवरी महिनाको १५ तारिक उनीसँग प्रत्यक्ष भेट भएको थियो । तत्कालिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को युएई भ्रमणको बेला जनवरी १४ तारिक उनी युएई आएका थिए । नेपाली दूताबासले दूताबासमा आयोजना गरेको नेपालीहरुसँगको भेटघाट कार्यक्रम पश्चात हामीले उनलाई अबुधाबीको क्यापिटल होटलमा भेट गर्यौ । कारण २ वटा थिए ।
१. नेपाली जनप्रगतिशिल मँच, युएईले दुबईमा आयोजना गरेको सार्वजनिक कार्यक्रमको बारेमा दुताबासको सकारात्मक सहयोग रहेको देखिएको थिएन । दुताबासले मँचलाई दिउसो ३ बजे कार्यक्रम गर्न भनेको थियो । श्रमिकहरु रहेको देशमा दिउसोको समयमा कार्यक्रम गर्न सम्भब थिएन । मँचका अध्यक्ष हेमन्त पौडेल दुताबासले कार्यक्रम गर्न अनुमती नदिएको बारे भनिरहन्थे । धेरै पापड बेले पश्चात दिउसोको समयमा कार्यक्रम गर्ने बारे पौडेलले हामीलाई जानकारी गराए ।
हामीले जसरी पनि ६ बजे पछाडि कार्यक्रम गर्न पौडेललाई दबाब दिईरहयौ । कार्यक्रम त ६ बजे पछी नै हुने भो तर दुताबासले अर्को अड्को थाप्यो । मँचकै पहलमा नेपाली बिजनेश काउन्सिलसँग बेलुकी ६ बजे भेटघाटको लागि छुट्याएको कार्यक्रमबारे दुताबासले सहमती दिएन । प्रचण्डको स्वकीय सचिब रहेका प्रकाशलाई हामीले यो बिषयमा जानकारी गरायौ । उनले अगाडि बढ्नुस्, तपाईंहरुको सेड्युल अनुसारको कार्यक्रम गर्नुस् भनेपछी मँचका अध्यक्ष हेमन्त पौडेल पनि खुसी हुनुभो ।
२. कार्यक्रम त हुनेभो । दुताबास भन्छ, कार्यक्रममा हामी नेपाली आएर बस्छौ र प्रचण्डको भाषण सुन्छौ, अनी जान्छौ । युएईका नेपालीहरुको तर्फबाट कोही पनि बोल्न र यहाँको समस्या राख्न नपाउने कुरा बताईयो । मँचका अध्यक्ष हेमन्त पौडेलले हामीलाई दुताबासले भनेको यस्तै कुरा जानकारी गराइरहन्थे ।
हामीले सोही होटलमा हेमन्त जीकै अगाडि प्रकाश जी सँग यो कुरा राख्यौ । प्रकाश दाहालले दुताबासको कुरा छोडिदिनुस्, तपाईंहरुले बनाएको सेड्युल अनुसार सामाजिक अगुवाहरुलाई आफ्नो भनाइ र समस्याहरु राख्न दिनुस् भने पछी कार्यक्रम अगाडि बढेको थियो । प्रकाश जीले यती नभनेको भए हामी भेला हुने प्रचण्डको भाषण सुन्ने र फर्कने बाहेक केही हुने थिएन ।
पछिल्लो पटक भिजिट भिसामा युएईमा आएर अलपत्र परेका १९ जना नेपालीहरुको समाचारको बारेमा उनले मलाई बिशेष चासो राखेर सोधेका थिए । मैले पनि पिडितलाई सहयोग गर्न र दोशीलाई कारबाहीको पहलमा सहयोग गरिदिन अनुरोध गरेको थिएँ । उनले प्रयास पनि गरेका थिए ।
एक पटक उनले भने, “सर१ यहाँ कर्मचारीहरु नै आफ्ना कर्मचारी बच्चाउन लाग्दा रहेछन् ।” उनले आफ्नै पार्टीका मन्त्रीका स्वकीय सचिबले पनि यो केसलाई सिरियसले नलिएको भनेर दुखी बन्दै उनीसँगको कुराकानीको स्क्रिन सर्ट नै पठाएका थिए । त्यो स्क्रिन सर्ट केही दिन पस्चात उनै स्वकीय सचिबलाई ईनबक्स गरिदिनेछु । मृत्‍यु शास्वत हो । असामायिक निधन झनै दुखद हुन्छ । प्रचण्ड परिवारले शोकलाई शक्तीमा बदल्ने हिम्मत गरुन । अल बिदा प्रकाश । (जनताटाईम्स डट कमबाट)